Indlela enhle yokufunda ulimi ukufunda lapho kukhulunywa khona njengolimi lwendabuko. Ngamanye amagama, kuyisinqumo esingcono kakhulu sokuthi abantu bafunde isiJalimane eJalimane uma benethuba.
Vele uthola imfundo enhle, eyolimi lwangaphandle eTurkey ebonakalayo enkabeni yebhizinisi lakho, kepha ukuthi uhlala kahle kangakanani endabeni yokuthi abantu bakhulume ulimi lwabo lwendabuko futhi bathole imfundo yakho izobukeka. Ngalesi sizathu, kuyasiza ukucabanga ngokucophelela ngenkathi wenza izinqumo zakho. Labo abafuna ukufunda isiJalimane eJalimane babhalisa ezikoleni ezihlinzeka ngemfundo yolimi yangasese ngangokunokwenzeka. Kodwa-ke, ngaphandle kwalokho, siyabona ukuthi labo abafuna ukufunda isiJalimane eJalimane bahlukaniswe kabili.
Ngenkathi elokuqala kulawa maqembu amabili lifaka phakathi abantu abaphumelele futhi bafunda uhlelo lokuthweswa iziqu eJalimane, iqembu lesibili yilabo abafuna ukufaka isicelo sohlelo lwe-master futhi bahlela ukuzilungiselela kusengaphambili. Uma sidinga ukuhlola la maqembu amabili ngokwahlukana, singasho okulandelayo.
Abafundi Befunda eJalimane
Laba bafundi ngabantu abaphumelele noma yiluphi uhlelo lwemfundo ephakeme eJalimane futhi beza ukuzofunda. Ngenkathi imfundo yabo iqhubeka, bazama nokufunda isiJalimane. Kuyabonakala ukuthi abantu abeza eJalimane ngokwamukela isikhundla somsebenzi futhi bazama ukufunda isiJalimane okwamanje bangena kuleli qembu. Laba bantu kufanele babhalise esikoleni solimi esizimele futhi bathole imfundo yaseJalimane emkhakheni abawudingayo. Ungathola imininingwane ngokubukeza ezinye izindatshana zethu mayelana nezikhathi zokuziqeqesha nezimali ezilinganiselwayo.
Abafundi Abafuna Ukufunda eJalimane
Abafundi abakuleli qembu yilabo abafuna ukubhalisela uhlelo lwemfundo ephakeme noma uhlelo lwenyuvesi eJalimane. Ngalesi sizathu, kungokwemvelo ukuthi bafuna ukufunda isiJalimane ngaphambi kwesikhathi futhi benze amalungiselelo. Futhi, uma ubhalisa ohlelweni lwemfundo ephakeme lwesiNgisi eJalimane, kufanele ukhokhe imali eningi minyaka yonke. Kepha uma uthola imfundo yolimi ngemali encane bese uqala ukufunda eyunivesithi yolimi lwesiJalimane, ungazuza elungelweni lokuthola imfundo yamahhala.
Iyini iPasipoti, Iyini, Yingaphi Futhi Kufanele Yithenge Kanjani, Yiziphi izinhlobo zayo?
I-Germany Izithombe Nevidiyo YeJalimane Das Ist Deutschland